Imbali kunye neJografi yeTibet
Umda wehlabathi, i-Shangra-La, okanye uMhlaba weNyoka-phantsi kolawulo lwesiTshayina
I-Plateau yaseTibetan yindawo enkulu eningizimu-ntshona yeChina ngokuphindaphindiweyo ngaphezu kwee-4000 zamitha. Lo mmandla owawubukumkani obuzimeleyo obuzimeleyo ezaqala ngekhulu lesibhozo waza waveliswa kwilizwe elizimeleyo kwikhulu lama-20 ngoku lilawulwa yiChina. Ukutshutshiswa kwabantu baseTibet kunye nokwenza kwabo ubuBuddha kubanzi.
I-Tibet ivaliwe imida yayo kumazwe angaphandle ngo-1792, igcina iBritish yaseNdiya (ummelwane waseTibet osentshonalanga-ntshona) yada yada yaza yafika iBritish imfuno yendlela yokuthengisa kunye neChina yabangela ukuba bathathe iTibet ngamandla ngo-1903.
Ngomnyaka we-1906 amaBritani kunye namaShayina batyikitya isivumelwano soxolo esanika iTibet kwisiTshayina. Kwiminyaka emihlanu kamva, iiTibetan zaxosha amaTshayina zaza zachaza ukuzimela kwazo, ezaza zada de kube ngo-1950.
Ngowe-1950, kungekudala emva kokuguquguquka komnumzana waseMao Zedong , i-China yahlasela iTibet. I-Tibet yacela uncedo kwiZizwe eziManyeneyo , zaseBrithani kunye namaNdiya atsha ngokuzimelela ukuba ancedwe-ayikho nto. Ngomnyaka we-1959 ukuvukela kweTibetan kwaxutywa yiTshayina kunye nenkokheli kaRhulumente waseTibetan, i-Dalai Lama, yabalekela eDharamsala, e-Indiya waza wadala urhulumente-ekuthunjweni. I-China ilawula i-Tibet ngesandla esiqinileyo, ishutshisa amaBuddhist aseTibet kunye nokutshabalalisa indawo zabo zonqulo, ingakumbi ngeli xesha leNkcubeko yeNkcubeko (1966-1976).
Emva kokufa kukaMao ngowe-1976, iiTibetans zafumana ukuzimela okuthe ngqo kodwa nangona amaninzi karhulumente waseTibet afakwe kwilizwe lesiTshayina.
Urhulumente waseTshayina ulawulo lweTibet njenge "Autonomous Region of Tibet" (Xizang) ukususela ngo-1965. Abaninzi baseTshayina baye bakhuthazwa ngokwezimali ukuba bathuthele kwiTibet, bahlalutye umphumo weentlanga zaseTibet. Kubonakala ukuba i-Tibetans iya kuba yincinane ezweni labo kwiminyaka embalwa. Inani elilonke labantu baseXizang li malunga nezigidi ezi-2.6.
Ukuphakanyiswa okongeziweyo kwenzeka kwimihla embalwa ezayo kunye nomthetho wecala wamiselwa kwiTibet ngo-1988. Imizamo yeDalai Lama yokusebenzisana neChina ekujonganeni neengxaki zokuzisa uxanduva kwiTibet yamzuzela iNkokheli yoKhuseleko iNobel ngo-1989. Ngomsebenzi weDalai Lama , iZizwe eziManyeneyo zibizele iChina ukuba ziqwalasele ukunika abantu baseTibet ilungelo lokuzimela.
Kwiminyaka yakutshanje, iChina iye yachitha iibhiliyoni ukuphucula umbono wezoqoqosho ngeTibet ngokukhuthaza ukhenketho kunye nerhwebo kummandla. I-Potala, isihlalo sangaphambili sikarhulumente waseTibet kunye nekhaya leDalai Lama yinto ekhangayo eLhasa.
Inkcubeko yaseTibet yinto yakudala equka ulwimi lwaseTibet kunye nesakhiwo esithile seTibetan seBuddhism. Iingqungquthela zengingqi zihluka kwi-Tibet ngoko ulwimi lwesiLhasa luye lwaba yi-Tibetan lingua franca.
Amashishini ayengekhoyo kwiTibet ngaphambi kokuhlasela kweTshayina kunye namashishini amancinci namhlanje atholakala kwinqununu yaseLhasa (i-2000 yabantu abayi-140 000) nakwezinye iidolophu. Ngaphandle kwimizi, inkcubeko yaseTibet yesizwe ibandakanywa ngokuyinhloko ngabantu abatyunjwa, abalimi (ibhali kunye nemifuno yeengcambu zezityalo eziphambili), kunye nabemi behlathi. Ngenxa yomoya obomileyo weTibet, inkozo ingagcinwa kwiminyaka engama-50 ukuya kuma-60 kunye nebhotela (ibhotela enokuthi iyintandokazi engapheliyo) ingagcinwa unyaka.
Izifo kunye nezifo zesifo asiqabile kwi-plateau enomileyo, ejikelezwe iintaba ezide kakhulu zehlabathi, kuquka iNtaba Everest ngasezantsi.
Nangona i-plateau isomile kwaye ifumana umyinge wama-intshi angu-46 (46 cm) yemvula ngonyaka, i-plateau iyimithombo yamanzi amakhulu ase-Asia, kuquka iMlambo yase-Indus. Inhlabathi yonke iquka indawo yeTibet. Ngenxa yokuphakama okuphakamileyo kommandla, ukuhluka kwexesha lokushisa kunokuba kunqamle kwaye ukuhluka kwedayira (kwimihla ngemihla) kubaluleke kakhulu - ukushisa kwiLhasa kunokulingana no--2 ° F ukuya kwi-85 ° F (-19 ° C ukuya ku-30 ​​° C). Iziqhumane kunye nesichotho (kunye nesichotho sobunzima bebhola ye-tennis) zingxaki kwiTibet. (Ukwahlula okhethekileyo kwabagwenxa bokomoya kwakukhokhelwa ukukhusela isichotho.)
Ngaloo ndlela, isimo seTibet sihlala sibuza.
Ngaba inkcubeko iya kuhlanjululwa yintsimi yaseTshayina okanye i-Tibet iya kuphinda ibe "Ikhululekile" kwaye imele?
IJografi yeLizwe eliPhezulu leNgcaciso yeoli
Daily Journal ka-1969 I-Woodstock Festival
50 Amanqabana amanqabileyo aMinyaka eyi-50 edlule okanye kunjalo
Amaphephancwadi e-Ring Ring aphezulu ama-Punchers angu-100 kuwo onke amaxesha
Baphi Ngoku? Ngowe-1976 i-Olympic Boxer Leon Spinks
Jongana neCandelo eChina
Iincwadi ezi-3 eziphezulu ze-SAT entsha ngo-2016
Umkhombe waseKesem (uSirayeli)
Uphuhliso loqoqosho lweSingapore
I-Primer kwi-Line-Core Trolling Line
AbaPhathiswa beeNyala zoBuDumi beShumi
Umlingo Wand Breaker
Indlela yokuba yiLungu leBhodi yeSikolo
I-University State eMorgan State Admissions
Abazalwana ababulalayo-uGary noThadede Lewingdon
Uthini Umthandazo WeNkosi?
I-Secularism Vs I-Secularization: Yintoni eyahlukileyo?
Yintoni Ingcaciso YeBhayibhile Yomtshato?
Funda iJapan Word Raku
Ibinary Large Object of Blob Architecture
Indlela iNkokeli kunye neNkxaso yama-Oscars asebenza ngayo
Indlela yokuLawula kunye nokuchonga iMonkey Puzzle Tree Tree
Ukuqonda u-Interquartile Range kwi-Statistics
Saint Catherine waseAlesandria
Indlela Yokwenza Ukutshatyalaliswa kweKhozi kwiSikethi zemizobo
Imfazwe Yehlabathi II: I-HMS Venturer Sinks U-864